PR media sosialy - risika sy valisoa | Martech Zone
PR media sosialy - risika sy valisoa
Zoma, Aogositra 28, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Lorraine Ball
Taona maro lasa izay, hitako ny tombotsoan'ny PR an-tserasera ho toy ny fomba fanitarana ny fampahafantarana ireo mpanjifako. Ho fanampin'ny fandefasana ireo tranokalam-baovao efa niorina dia namorona ny tranokalako ihany aho - Indy-Biz, fomba iray hizarana tantara vaovao tsara momba ny mpanjifa, ny namana ary ny vondrom-piarahamonina biz eo an-toerana.
Nandritra ny roa taona mahery dia nahazo fandresena ity tranonkala ity. Tsara ny zava-drehetra, hatry ny omaly, raha nisy olona iray tena tsy faly nandefa hevitra tena ratsy. Ny valin-kafatra dia valin'ny tantara iray momba ny orinasa eo an-toerana, tantanan'ny namako akaiky iray.
Rehefa nandinika ilay hevitra aho dia tsy azoko izay hatao. Ny tena tiako hatao dia ny mamafa ny fanehoan-kevitra. Ahoana no ahasahiany milaza izany momba ny namako? Saingy ny fanesorana ny fanehoan-kevitra dia nanitsakitsaka ny fahatokisana naoriko niaraka tamin'ny mpamaky ahy. Ary raha tena sosotra izy dia nalefany tany amin'ny toeran-kafa fotsiny ilay resaka.
Fa kosa, izaho nandefa valiny, tsy mifanaraka amin'ny zavatra nosoratany, ary nanome "lohan-doha" ny namako. Nangataka olona maromaro hafa teo amin'ny fiarahamonina izy mba handefa hevitra. Avy eo nanampy ny valinteniny izy, nandrisika ilay olona tsy faly hifandray aminy mivantana, niaiky fa diso ny nomeraon-telefaona tamin'ny fanambarana an-gazety voalohany.
Tamin'ny farany, ity dia fandalinana tranga iray lehibe amin'ny fomba tokony hampiasan'ny orinasa ny media sosialy hitantanana ny marika an-tserasera sy ny lazany. Tsy azonao atao ny misoroka na mifehy ny hevitra ratsy. Hisy izy ireo. Fa raha manana tafika mpankafy tsy mivadika ianao dia hiaro anao izy ireo ary hanampy anao hitantana ny toe-javatra. Ho fanampin'izay, tsy tokony hiafina ao anaty fasika ianao, fa hanetsika an'ireo mpanjifa tsy faly na mpitsikera amin'ny forum ho an'ny daholobe, dia hanamafy ny lazanao amin'ny ankapobeny.
Tags: fanehoan-kevitrafanehoan-kevitra antononyIndy Bizmitantana hevitrafanehoan-kevitra ratsyRisika vs valisoahaino aman-jery sosialy
Ahoana ny fomba iasana irery
28 Aogositra 2009 amin'ny 4:53 PM
Nahita an'io aho rehefa nipoitra omaly ary nanamafy fotsiny ny finoako fa raha afaka mikolokolo sy mitombo vondrom-piarahamonina tsy mivadika ianao, dia diso faran'izay diso ny fampahalalana diso sy ny trolling ataon'ny mpikambana ao aminy. Mandritra izany fotoana izany ny fanehoan-kevitra miiba dia tsy zavatra ratsy foana satria manome antsika fotoana hihainoana sy hanitsiana izay mety tsy nety.
28 Aogositra 2009 amin'ny 5:22 PM
Nino foana aho fa izany no izy, nahafinaritra ny nahita ny media sosialy nihetsika!